काठमाडौं । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यही माघ २१ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यमा ५ करोड २२ लाख मूल्य बराबरको ५ लाख २२ हजार कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन(आईपीओ) को बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो ।
निष्काशन गरिने साधारण शेयरमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् २६ हजार १०० कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको र जारी पूँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् ८ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहने ४ लाख ८७ हजार ९०० कित्ता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले यही माघ २१ देखि आवेदन दिन पाउने कम्पनीले जारी गरेको आह्वान पत्रमा उल्लेख छ । सर्वसाधारणले माघ २५ सम्म न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार २२० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् र यो अवधिसम्म माग बमोजिम आवेदन नआए आगामी फागुन ६ गतेसम्म निष्कासन खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सीआस्वा सुविधा प्रदान गर्न अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयका साथै अनलाइनमार्फत ‘मेरोशेयर’ प्रयोग गरेर पनि शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ ।
कम्पनीको पूँजीको संरचनामा अधिकृत पूँजी २५ करोड र हालको जारी पूँजी १६ करोड बराबरको तथा तत्कालको चुक्तापूँजी १० करोड ७८ लाख छ । विवरणपत्रमार्फत सर्वसाधारणलाई खरिदका लागि खुला गरेको शेयरको बाँडफाँडपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी १६ करोड पुग्नेछ।
शेयर बजार झन्डै ९ अङ्कले बढ्यो, हृेर्नुहोस् कतिको भयो कारोबार ?
शेयर बजारमा आज साढे १८ अङ्कको गिरावट, दुई अर्ब ३२ करोड भन्दा बढिको कारोबार
आज पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढ्यो, कतिको भयो कारोबार ? हेर्नुहोस्
आज नेप्से ४४ अंकले बढ्यो, एक अर्ब बराबरको कारोबार
आज होटल, विकास बैंक, जीवन बीमा र लगानी समूहबाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ । दुई सय २२ कम्पनीका ३३ लाख २४ हजार कित्ता शेयर एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
शेयर बजार झन्डै १८ अङ्कले बढ्यो, कतिको कारोबार भयो ? हेर्नुहोस्
आज जाल्पा लघुवित्तको शेयर १० प्रतिशतले तथा घलेम्दी हाइड्रो र माउन्टेन इनर्जी नेपालको शेयर आठ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । समग्रमा बजार बढे पनि उन्नति सहकार्य लघुवित्त कम्पनीको शेयर झन्डै पाँच प्रतिशतले घटेको छ । पुरा पढ्नुहोस्